Michel Randria: hoporofoiny fa « Ny sary no mitoetra » | NewsMada
Michel Randria: hoporofoiny fa « Ny sary no mitoetra »
Ny teny no mandalo fa « ny sary no mitoetra”. Izay ny lohahevitra voizin’i Michel Randria, mpanao hosodoko tsy zovina intsony, amin’ny varotra fampirantiana, hotanterahiny etsy amin’ny Is’Art galerie Ampasanimalo, manomboka ny 17 janoary izao. “Amin’ ny maha tontolon’ ny kanto ny hosodoko, misy andraikitra maro entiny: mitaiza, mitahiry, mizara hafaliana. Mitaiza ao anatin’ny tontolon’ny kanto, mitahiry ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy, izay efa tsy ho tazana eny amin’ny fiarahamonina intsony ato ho ato, ny hosodoko”, hoy ny fanazavan’i Michel Randria.
Mizara hafaliana amin’ny alalan’ny hakanton’ny loko voarindra sy ny endriny voakaly ary ny sehon’ny fahasahiana ihany koa anefa ny hosodoko, araka ny fahitan’ity mpanakanto ity hatrany. Manampy ny mpitsidika hankafy ny tontolo manodidina azy eo amin’ny fiainany andavanandro, izay tsy tsikariny akory ny hakantony ny fampirantiana tanterahin’i Michel Randria.
Mampanantena ity mpanakanto ity fa “hitoetra ao an-tsainao, ary maniry ny hitoetra ao an-tranonao ny sary miloko, izay zavakanto ho hitanao eny amin’ny fampirantiana”. “Ny kitsipitsipiky ny sary dia milaza ho tontolon’ny fahasahiana sy tsy matahotra amin’ny filazana ny zavatra tiana haseho, tsy voafehin’ny lalàn’ny tontolo hafa. Ny loko marevaka hita manaingo azy, mampiseho ny hafanana entin’ny tontolo iainana andavanandro, ary ny loko mangatsiaka kosa, milaza ny filaminan-tsaina manoloana ny kanto”, hoy hatrany i Michel Randria, nanazava ny mahakasika ireo tabilao, miisa 20 eo ho eo, harantiny etsy amin’ny Is’Art galerie .